Android မှာကစားနည်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း Gadget သတင်း
ကျွန်ုပ်တို့ချုပ်နှောင်ခံထားရသောကြောင့်အိမ်တွင်ဖျော်ဖြေရေးရှာရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ၎င်းအတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိပြီးတစ်ခုမှာဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင် console တစ်ခုမရှိကြသည့်အတွက်သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့်ကစားရန်ဖြစ်သည် ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာမဟုတ်ဘဲစွမ်းအားအရှိဆုံးဂိမ်းကချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျေနပ်လောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤပြproblemနာကိုအနည်းငယ်နည်းပါးစေရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။
ယခုတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းတွင်ရရှိနိုင်သည့် application ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အမည်ရှိ GLTool Gamers ၎င်းသည်ဂိမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ရန်ခက်ခဲသောနေရာများရှိစက်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် PUB Gfx + Tool Developer မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည် အရာအခြားပိုပြီးအဆင့်မြင့် GFX optimization tool ကိုပါရှိပါတယ်။
1 ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် Gamers GLTool သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2 ဖြစ်နိုင်သော configurations နှင့် options များ
2.2 ဂိမ်း tuner
3 Pro ဗားရှင်းငွေပေးချေမှု options များ
ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် Gamers GLTool သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စကားလုံးများသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်“ တရုတ်” နှင့်တူနိုင်သည် "CPU, GPU or RAM" ဒါပေမယ့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၏အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုအတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်နေကြသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းသည်ဤရှုထောင့်များကိုအမြင့်ဆုံးသို့တိုးမြှင့်စေရန်အတိအကျလုပ်ဆောင်သည် အလိုအလျောက်ဂိမ်း mode ကို။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးသူများက၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် သူတို့ကအတု "AI" algorithms သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောဘာမှမသုံးကြဘူး၎င်းအစားသူတို့သည်ဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်ကြိုးစားသည်။
သင် app ကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပထမဆုံးပြုလုပ်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်မည်သည့်ပရိုဆက်ဆာနှင့်မည်သည့် GPU သည်ရှိသည်။ ဒီအပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကွဲပြားလိမ့်မည်။ ငါ့ကိစ္စမှာ ၂၀၁၇ ကနေအဆင့်မြင့် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာကိုသုံးတယ် (Snapdragon 835၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ GPU ကိုအတူ) Adreno (540)။ ဒီ panel ကနေ app applications များစာရင်းနှင့် (သို့နှင့် game mode တွင်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတက်စေချင်သည်ကို) နှင့် paid function များအတွက် mode ကိုရွေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်လျှင်ကျွန်တော် menu ကိုဝင်ရောက်ပါ ဂိမ်း Modes သာဆက်တင်များ.
ဖြစ်နိုင်သော configurations နှင့် options များ
ရိုးရာဂိမ်းစနစ်၏အခြေခံအကျဆုံးလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် 'Game turbo' mode ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
CPU နှင့် GPU Boost: အားလုံး၏အရေးပါ စီပီယူ ထိုသို့သြဇာလွှမ်းမိုးနေသောသူတို့ကိုဖြစ်စဉ်များအဖြစ်ကနေအားထုတ်မှုလိုအပ်သောသူတို့အားဖြစ်စဉ်များဖယ်ရှားပစ်နေကြသည် GPU ကို (သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားလို့မရဘူး၊ စိတ်ကြိုက်အလွှာပေါ်တွင်မူတည်သည်) ။ ဤသည်သည်အလွန်ပေါ့ပါးသောကြောင့်ဂိမ်းများတွင် cores များအားလုံးကိုမဖွင့်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
RAM Memory ဖြန့်ချိမှု - နောက်ခံအရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးနေသော applications များအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည် အားလုံး RAM ကိုတက်အခမဲ့ နှင့်ကစားရန်ရရှိနိုင်ပါစေ။
စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း ဖုန်းပေါ်ရှိမည်သည့် application သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုသည်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသောဂိမ်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအခါသတိပေးလိမ့်မည်။
ဤရွေ့ကားအားလုံးပုံမှန်အားဖြင့်လုံလောက်သောလိမ့်မည်ဟုတစ် ဦး ရိုးရာဂိမ်း mode မှာအခြေခံအကျဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြသည် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင် မည်သည့်ဂိမ်းအတွက်ပြproblemsနာများရှိသည်ဖို့မအဖြစ်, ဒါပေမယ့်ရဲ့သို့စူးစမ်းကြကုန်အံ့ ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတဲ့ရွေးချယ်မှုများ၏အကွာအဝေး။
ဂိမ်း resolution: ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ resolution ကိုချိန်ညှိ 940 × 540 (qHD) မှ 2560 × 1440 (WQHD) အထိ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသော resolution ရှိသောမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်အသုံး ၀ င်ပါက system ကို 2K သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုပါကဂိမ်းများကို Full HD (သို့) HD သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ ဒါကိုစိတ်ထဲထားထားရမယ် ကျနော်တို့ resolution ကိုလျှော့ချလျှင်ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မည် ပိုဆိုးသွားရင်တောင်မှ။
ဂရပ်ဖစ်: ငါတို့ညှိနိုင်တယ် ဘယ်လိုဂိမ်းပုံရိပ်တွေပြန်ဆိုနေကြသည်။ ဂိမ်း၏အရိပ်, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားသူများကိုချိန်ညှိ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသော resolution ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်, ပျော့ပြောင်းပြီး, HDR ... စသည်တို့ ၎င်းသည်ရာသက်ပန် PC ပေါ်တွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့
FPS ရွေးချယ်ခြင်း (တစ်စက္ကန့်ဘောင်များ): ၎င်းသည်ကစားရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဂရပ်ဖစ်ချိန်ညှိမှုဖြစ်သည်၊ ဂိမ်းထုတ်လွှင့်မှုသည်၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အထူးသဖြင့် Shotters ၌တည်၏ Fortnite, Call of Duty သို့မဟုတ် PUBG လိုမျိုး။ ဒါဟာ 60 FPS မှာကစားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးလျှင်ဂိမ်းတွင် FPS 30 အကန့်အသတ်ရှိသည့်ဖုန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
ပုံစစ်ထုတ်စက်များ - ဂိမ်းကိုယ်နှိုက်အထက်တွင်အသုံးပြုသောအရောင်စစ်ထုတ်စက်များ။ သူတို့ကဂိမ်းကိုကြည့်သကဲ့သို့ပြုမူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်၊ လက်တွေ့ကျသော၊ တိုက်ရိုက်ပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
MSAA: ဒီချိန်ညှိချက်ဟာ PC ဂိမ်းတွေမှာလည်းတော်တော်များပါတယ်။ Multisample Anti- aliasing တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ချောမွေ့ technique ကို ပုံရိပ်အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့။
အထူးသဖြင့်၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် FPS၊ shading နှင့်အခြားသူများကိုအတင်းဖိအားပေးပါကမိုဘိုင်းသည်လိုအပ်သည်ထက် ပို၍ ခံရနိုင်သည် ကအနိမ့် / အလတ်စားအကွာအဝေးလျှင်အထူးသဖြင့်ပါ။ သို့သော်၊ သင်၏ကိရိယာအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုမတွေ့မချင်းဆက်တင်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Pro ဗားရှင်းငွေပေးချေမှု options များ
DNS ပြောင်းလဲမှုကြောင့် Ping တိုးတက်မှု။ အွန်လိုင်းဂိမ်းအတွက် ping ကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားခြင်းသည် app မှ DNS server ကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။
Ping စမ်းသပ်မှု - နိမ့်ဆုံး ping ရှိသည့်တစ်ခုကိုရှာရန် DNS ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာမှစမ်းသပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သုည - lag mode: ဂိမ်းချိန်ညှိချက်များသည်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးပြီးအဓိကရည်မှန်းချက်မှာлагကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
low-end အတွက်ဂရပ်ဖစ်: အကယ်၍ သင်၏စက်ကိရိယာသည်နိမ့်ကျနေလျှင်ဂိမ်းများကိုလျောက်ပတ်စွာရွေ့လျားနိုင်ရန်အတွက်တိကျသောချိန်ညှိချက်များအသုံးပြုထားသည်။
ကျွန်တော်အကောင့်သို့ယူလျှင် Pro application ကိုယူရို ၀.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကစားလိုပါက ping သို့မဟုတ် lag သည်ဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ device သည်ဂိမ်းများကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်သည့်စွမ်းရည်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီမှာဗားရှင်းကို download လုပ်ယူနိုင်သည် gratis နှင့် PRO.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုစိတ်ထဲရပါမည် ဤချိန်ညှိချက်များသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည် သိုမဟုတ် Terminal temperature နှစ်ခုလုံးဆက်စပ်နေသည်။ terminal လိုအပ်သောစွမ်းအင်များလေ၊ အပူချိန်မြင့်လေလေအပူချိန်မြင့်လေလေစားသုံးလေလေဖြစ်သည်။
ငါ့ထောက်ခံချက်က ချိန်ခွင်ကိုထိန်းထားနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ကြစို့ ဘက်ထရီအလွန်နည်းပါးပါကဂိမ်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အသုံးမကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကစားနေစဉ် Terminal ကို charger ထဲသို့ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါအပူချိန်ကြောင့်ဘက်ထရီယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » Android မှာကစားနည်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း